Old Balbirnie Stable - I-Airbnb
Isitali esalungiswayo esandula kulungiswa, sibekwe kwintendelezo entle ebikhe yasebenzela ikhaya elinobukhazikhazi (eyaziwa ngokuba libhaso eliphumelele ibhaso iBalbirnie House Hotel), ibekwe kwindawo eyi-400 yepaki ekwasindleka iBalbirnie Park Golf Course (ekuthi iindwendwe zikwazi ukufikelela kuyo. I-35% isaphulelo), i-Markinch Caravan Park, i-Victory Walled Garden, kunye nokuhamba kakuhle kwingqokelela yayo edumileyo yeRhododendron.
Zininzi izizathu zokuba kutheni le yeyona ndawo ifanelekileyo, yiza nje uzozibonela!
Nceda ubukele ividiyo yethu yedrone kuYouTube
"Isitayile esidala saseBalbirnie"
I-Apartment ehonjiswe kumgangatho ophezulu kunye neendwendwe engqondweni.
Iholo eliphangaleleyo, elinelanga elivulekileyo lokungena.
Igumbi lokulala eliphindwe kabini eline:
Ifakelwe, iiwodrophu ezinezipili ezipheleleyo eziphindwe kathathu
Iitafile ezisecaleni kwebhedi kunye nezibane zasebusuku kumacala omabini
Khupha umatrasi omnye (uyazikhethela ukuba uyafuneka)
Ibhedi yokuhamba ukuba iyafuneka
Igumbi lokuhlambela elinendawo enkulu yokuhlambela, isinki kunye nendlu yangasese
Indawo evulekileyo, enentlalontle yokuhlala / ekhitshini enesofa ezi-2 zesikhumba, enye yazo itsalela kwibhedi ephindwe kabini.
Iintlobo ngeentlobo zemidlalo yebhodi yayo yonke iminyaka, izixhobo zokufunda kunye neTV kunye ne-wifi.
4.98 · Izimvo eziyi-97
Kukho iindawo ezithandekayo zokuya, ubone kwaye wonwabe kwindawo yonke.
Idolophu yaseMarkinch, eyaziwa njengekomkhulu lakudala laseFife, ikumbindi weFife, enendawo entle, ilizwe elihle, iindawo eziselunxwemeni, iilwandle, iindawo zokutyela kunye nezinto ezinomtsalane, iyenza ibe yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphonononga iFife ngakumbi.
Kuphela yimizuzu engama-30 yokuqhuba ukuya nokuba yi-St Andrews (iKhaya leGalufa) okanye e-Edinburgh (ibambe umnyhadala odumileyo we-Edinburgh Fringe ngaphezulu kweminyaka engama-70) kwaye kufutshane nezinye iindawo ezininzi ezidumileyo njengeendawo eziphakamileyo zaseScotland kunye nemida. Apha ungafumana izixa ezingapheliyo zezinto ezinomtsalane kunye nembali kunye nobuhle bendalo.
Ulwazi oluthe kratya luyafikeleleka kwindawo yokuhlala, lunika iinkcukacha ezinomtsalane kunye nezinto eziluncedo kwaye sihlala sikufutshane ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye ufuna ukukhomba kwicala elilungileyo.
Wamkelekile wena xa ufika kubabuki zindwendwe abanobubele, abafikelelekayo nabanokuqhagamshelwana nabo.
Uhlala ukuvuyela ukunceda, ukucebisa kunye nokuncedisa ukuze wenze ukuhlala kwakho kube yeyona nto ingcono. Akukho nto ihlala iyingxaki kakhulu.
Indawo yokupaka ifumaneka ngaphandle kwe-arch way.
Ukuba ibhedi eyongezelelweyo iyafuneka, nceda usazise kwaye siza kubona ukuba singakulungiselela ntoni na.
Ipakethe eyamkelekileyo ebandakanya izinto eziyimfuneko ezinje ngecereal, isonka, ibhotolo, ijem, iti, ikofu, ubisi njlnjl, iya kuhlala ikulindile ekufikeni kwakho.
Uhlala ukuvuyela ukunceda, ukucebisa kunye nokuncedisa ukuze wenze ukuh…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Markinch